सुवास नेम्वाङलाई प्रश्न : एकपक्षीय बैठक बसेपछि सहमति कार्यान्वयन हुँदैछ भनेर कसरी पत्याउने?
नेपाल लाइभ शनिबार, साउन २, २०७८, १२:४९
काठमाडौं- नेकपा (एमाले) एकता कार्यदल शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटीले विघटन गरेको छ। तर, शनिबार उक्त कार्यदलका सदस्यहरुले लामै छलफल गरे। त्यो छलफलको निष्कर्ष के हो? संकेत के हो? कार्यदलको बैठकपछि नेपाल लाइभकर्मी डिबी खड्काले ओली पक्षबाट कार्यदलका संयोजक रहेका सुवास नेम्वाङलाई प्रश्न गरेका छन् :
विघटित नेकपा (एमाले) एकता कार्यदलको बैठकले के विषयमा छलफल गरेर कस्तो निष्कर्ष निकाल्यो?
आज हामी स्थायी कमिटीका नेताहरु अनौपचारिक रुपमा बसेका थियाैं। हामी सबैको चिन्ता भनेको कम्युनिष्ट पार्टीको एकता, एमालेको एकता र देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि अन्योल र चिन्ता बढेको देखिएको छ। त्यसलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेका हौं। निरन्तर अघि बढाउँछौं।
भर्खरै १० बुँदे सहमति भएको छ। सहमति पत्र पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका छौं। वरिष्ठ नेता नेपाललाई बुझाएका छौं। त्यसलाई स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। एमाले एकताबद्ध हुँदा त्यसले देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनको साथसाथै लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युननिष्ट आन्दोलन सशक्त बनाउँछ। यही विश्वासका साथ हामी छलफलमा जुटेका थियौं। छलफलको निष्कर्ष त्यो १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढाउने भन्ने छ। छलफललाई निरन्तर अघि बढाउँछौं।
सहमतिको पहिलो बुँदामा २०७५ जेठ २ मा फर्किने भनिएको छ। हिजो एमालेको स्थायी कमिटी र संसदीय दलका बैठक बसे। ती त्यही सहमतिअनुसार जेठ २ फर्किएका बैठक हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो। तर, रुपान्तरित एमालेकै बैठक बस्यो। सहमति कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्यो भनेर कसरी पत्याउने?
यसका विषयमा हामीबीच छलफल र चर्चा भएको छ। त्यो १० बुँदे सहमतिका विषयमा पनि हामी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्यौं, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीमा कुनै विवाद छैन। स्थायी कमिटीको बैठक, संसदीय दलको बैठकका कुराहरुमा त्यसका आवश्यकताहरु हुन्छन्। उदाहरणका लागि अचानाक प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भयो। प्रतिनिधि सभा बैठकअघि संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्छ। त्यो अधिवेशन अन्त्य हुँदा बस्नुपर्छ। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर संसदीय दलको बैठक रखियो र त्यसअघि सहमति अनुमोदन गर्न स्थायी कमिटीको बैठक राखियो। अदालतको फैसलाका विषयमा अत्यावश्यक निर्णय गरेर उठ्यौं। त्यही कुरालाई लिएर छलफल भयो। हामी १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकमत छौं।
शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाई हेर्ने एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेको भनिएको छ। तर, त्यसमा नेपाल पक्ष सहमत छैन र हुँदैन। यसरी दृष्टिकोण बाझिँदा कसरी एक ठाउँ आइपुग्ने अपेक्षा गर्न सकिएला?
पार्टीभित्र छलफल हुन्छन्। मतहरु हुन्छन्। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। अदालतले जे फैसला गर्‍यो, त्यसले धेरै कुराहरु भत्काएको छ। त्यसप्रति हाम्रो असहमति छ, असहमतिकाबीच पनि त्यसलाई मान्दै अघि बढ्छौं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। यही निष्कर्षका विषयमा हामीले आज पनि छलफल गर्‍यौं। १० बुँदे सहमतिलाई मान्दै अगाडि बढ्दा एकतामा पुगिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
आज छलफलमा जुटेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरु संयोगले विघटित एकता कार्यदलकै पर्नुभयो। तपाईंले तयार गरेको १० बुँदे सहमति पत्र अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले कार्यान्वयन नगरेपनि हामी एक ठाउँ रहन्छौं भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो?
कसैलाई पनि मन मष्तिष्कबाट बाहिर राखेर कुरा गरेका छैनौं। हामीले सिंगो एमालेलाई गोलबद्ध बनाउने हिसाबले, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने हिसाबले छलफल गरेका छौं र छलफल गरिरहेका छौं। हामीलाई विश्वास छ, हामी एकताबद्ध बनाउन सक्छौं।